I-Durga's Den - I-Eco-farm Private Cottage - I-Airbnb
I-Durga's Den - I-Eco-farm Private Cottage
Ocho Rios, Saint Ann Parish, i-Jamaica
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Lise
· Indlu yokugezela engasese ewuhhafu
U-Lise Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 30.
Umgomo wethu eDurga's Den ukwakha indawo enikelwe indlela yokuphila esimeme ngempela. Silwela ukuthola izixazululo ezidingweni eziyisisekelo njengokudla, indawo yokuhlala, amanzi, amandla kanye nempilo yomphakathi. I-Durga itholakala kuphela imizuzu eyi-15 ukusuka e-Ocho Rios, ogwini oluseNyakatho yeJamaica. Akuyona into engavamile ukubona izimbuzi nezinkukhu zizulazula lapha zigcwele imifino ekhangayo esiyisebenzisa ekudleni kwethu kwe-Farm-to-table. Itholakala ehlathini lemvula laseFern Gully, i-canopy yethu yemvelo inikeza indawo epholile futhi epholile.
Ingxenye yeqoqo lamakotishi egqumeni elibheke intaba ye-Ocho Rios emangalisayo nangale kwayo ngaselwandle lwe-Caribbean. Uma kubhekwa i-canopy yethu yemvelo indawo ipholile ngokwemvelo futhi inomoya.
Ikotishi elizimele elinombhede ophindwe kabili liyindawo ekahle yesihambi esihamba yedwa noma izithandani ezifuna ukuhlala okuyiqiniso kwama-Jamaican. Phezulu kwendlela yezinyawo ze-limestone nezitebhisi zokhuni igumbi lizwakale liqhelelene nesiphithiphithi somgwaqo omkhulu i-Ochi. Uvulandi kanye nezihlalo zakhona zokhuni zakha indawo enomoya ukuze ukhululeke endaweni evamile esivele ithule. Ikamelo liphelele namanethi omiyane nendawo enkulu yokugcina.
ubusuku obungu-7 e- Ocho Rios
4.78 out of 5 stars from 70 reviews
4.78 · 70 okushiwo abanye
Nakuba kuyimizuzu eyi-10 kuphela uma ushayela usuka e-Ocho Rios, amabhishi ayo, izitolo nezindawo ezihehayo ezaziwa emhlabeni wonke, sitholakala phezulu egqumeni, emaphandleni athule futhi apholile eFern Gully.
We are a couple loving our farm and our community. We are excited to share our luck with conscious travelers who want to discover the real Jamaica. We love the cool breeze of the…
Sihlala epulazini njengoba kuvame ukwenza amanye amavolontiya ethu aphesheya ngokubona nsuku zonke abasebenzi bethu bendawo abanobungane ngakho kuhlale kukhona umuntu lapho. Siphinde futhi sibambe izinkundla zokucobelelana ngolwazi ezimbalwa phakathi nonyaka ongabamba iqhaza kuzo (ngezindleko)
Sihlala epulazini njengoba kuvame ukwenza amanye amavolontiya ethu aphesheya ngokubona nsuku zonke abasebenzi bethu bendawo abanobungane ngakho kuhlale kukhona umuntu lapho. Siphin…
ULise Ungumbungazi ovelele